Maxkamad Masaari ah oo markale xabsi daa'in ku xukuntay Maxamed Mursi - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMaxkamad Masaari ah oo markale xabsi daa’in ku xukuntay Maxamed Mursi
June 18, 2016 Abdi Omar Bile World 0
Maxkamad Masaari ah ayaa xukun daa’in ku riday markale Madaxweynihii hore ee Dalka Masar, Maxamed Mursi maanta oo Sabti ah.
Maxkamada ayaa ku heshay Mursi eedaymo ah inuu dalka Qatar siiyay macluumaad sir ah, laakiin waxaa lagu xukumay isaga inuu hoggaaminayay urur aan sharci ahayn.
Madaxweynihii hore oo xilka laga tuuray ayaa horey loogu xukumay dil toogasho ah saddex jeer oo kala duwan.
Qatar ayaa ahayd taageerada ugu weyn ee Mursi, xukuumada Qaahira ayaa ku eedaysay dowlada Dooxa in ay taageero siiso kooxdii Mursi oo ay xukuumada Masar oo hadda jirta mamnuucday ee dhaqdhaqaaqa Walaalaha Muslimiinta.
Mursi ayaa ahaa Madaxweynihii ugu horeeyay Masar oo si xor ah loo doortay, wuxuuna xilka hayay sanad wax ku dhow kadib markii ciidanka militariga uu xabsiga dhigay bartamihii bishii Juulay, 2013.
December 6, 2016 Waqooyiga Kuuriya oo weerar kumbuyuutarada ah ku qaaday taliska milatariga Koonfur Kuuriya
A Somali police officer says a journalist has been seriously wounded in a car bomb blast in Mogadishu. Capt. Mohamed Hussein says Ismail Sheikh Khalif, also a media rights activist, was hurt Tuesday when the [...]